बाँस्कोटाको अडियो प्रकरणले वर्तमान सरकार संस्थागत भ्रष्टाचारमा कति लिप्त छ ? भन्ने कुरा पुष्टि भयो ः महत |
बाँस्कोटाको अडियो प्रकरणले वर्तमान सरकार संस्थागत भ्रष्टाचारमा कति लिप्त छ ? भन्ने कुरा पुष्टि भयो ः महत
काठमाडौं, १२ फागुन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाको अडियो प्रकरणले वर्तमान सरकार संस्थागत भ्रष्टाचारमा कति लिप्त छ ?भन्ने कुरा पुष्टि भएको स्पष्ट पारेका छन् ।
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले वर्तमान सरकार फोरजी काण्ड, यति काण्डदेखि अनेकौं काण्डमा फसेको आरोप लगाए । उनले भने,‘गोकुल
बाँस्कोटालाई माथिबाट निर्देशन र संरक्षण भएको छ । यो प्रकरणमा गम्भिर छानबिन हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि जवाफ दिनुपर्छ । हामीले यो प्रकरणमा विरोध गरिरहेका छौं । प्रधानमन्त्रीले यो प्रकरणमा मात्रै होईन, सबै भ्रष्टाचारका काण्डबारे संसदमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ । समग्र काण्डमा निश्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्छ ।’ महतले एमसीसी नेपालको हितमा रहेको बताउँदै यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने आफूहरुको भनाई रहेको सुनाए । उनले भने,‘यसमा कुनै सैन्य गठबन्धनको कुरा छैन् । तर, नेपालमा त नभएको कुरा अफवाह फैलाउने गरिएको छ । यो दुःखद् कुरा हो ।’ अमेरिकी सहयोग एमसीसीमार्फत नेपालमा आउने सहयोग अनुदान भएको सुनाउँदै यो नेपालले प्राथमिकता गरेको क्षेत्रमा खर्च हुने महतको भनाई छ । उनले भने,‘नेपालको विकासमा यति ठूलो रकम अनुदान आएको यो पहिलो हो, त्यो पनि नेपालले नै छनौट गरेको योजनामा लगानी गर्ने कुरा छ । यसमा आपत्ति मान्नुपर्ने केही कारण छैन् ।’
उनले एमसीसीमा कुनैपनि कुरा आपत्तिजनक नभएको जिकिर गरे । उनले भने,‘यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन् । हामीले त्यो अनुदान सहयोगलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। यसमा पारदर्शीता अपनाउनुपर्छ ।’ विगतमा अरुण तेस्रो विद्युत परियोजना तुहाईएको जस्तै एमसीसी पनि गुमाउने खतरा आएको उनको भनाई छ । उनले नेकपाले सरकारमा हुँदा एउटा कुरा र सरकारमा नहुँदा अर्कै कुरा गरेको टिप्पणी गरे। उनले भने,‘हामी त राष्ट्रहित देख्छौं । यहाँ ऋषिजीले
एमसीसी पारित गर्न कांग्रेसलाई किन हतार ? भन्नुभयो, हामी जे कुरा हो, त्यही भन्छौं । जनतालाई दिग्भ्रमित पार्दैनौं । हामी प्रचार र प्रोपोगाण्डामा विश्वास गर्दैनौं ।’ उनले अहिले एमसीसी तुहाउने प्रपञ्च भैरहेको गम्भिर आरोप लगाए । गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाको बारेमा प्रधानमन्त्रीले तुलोको एकातिर गोकुल र अर्को्तिर सबै राख्दापनि गोकुल नै भारी हुने भनेर बोलेको कुरााबट पनि भ्रष्टाचारमा गोकुल एक्लैको हात नभएको उनको टिप्पणी छ । उनले भने,‘अहिले त प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो बोली आफैंलाई भारी भएको छ । यो सरकार काम चाहीँ उल्टो उल्टो गरिरहेको छ । कामभन्दा बढि गफ गरिरहेको छ ।’